Maty tsy tra-drano ny mpamilin’ny kamiaobe nivadika tao amin’ny RN 1 Bis Pk 18+128 ao Marovoalavo, kaominina ambanivohitr’Alatsinainikely Miarinarivo, afakomaly. Nitondra vary akotry milanja 8 taonina ilay kamiaobe. Vokatry ny hafainganam-pandeha diso tafahoatra anefa, tsy voafehin’ny mpamily intsony ny fiara ka nivadika avy hatrany. Vaky ny lohany, naratra mafy kosa ireo olona roa niaraka taminy. Ny zandary avy ao amin’ny poste avancé Analavory no manao ny fanadihadiana.
Fatim-behivavy iray, 26 taona hita amin’ny reniranon’Ikopa eny Ampasika Anosimasina, afakomaly. Tsy fantatra mazava izay antony nahafaty azy fa olona teo amin’ny manodidina no nahita ny fatiny natsingevan’ny rano. Tsy nahitana ratra na dian-kapoka ny vatany. Tonga nanao fizahana ny razana ny zandary avy ao amin’ny borigadin’Itaosy sy ny dokotera avy ao amin’ny CSB II Bemasoandro.
Gony iray feno taolam-paty hitan’ny fokonolona tao amin’ny Ampasinambo Anjozorokely Madirovalo, ny herinandro teo. Taolan-dava avokoa ny ankamaroan’ireo taolam-paty ireo. Tsy fantatra kosa ny jiolahy tompon’antoka tamin’ity halatra taolam-paty ity. Tonga teny an-toerana nahitana ireo taolam-paty ireo ny zandary avy ao amin’ny Poste avancé Madirovalo. Nomena ny kaominina avy hatrany mba halevina ireo taolam-paty iray gony ireo.
Saika niharan’ny fitsaram-bahoaka ny raim-pianakaviana nahavita namono nahafaty ny vadiny tao Marodiona Sahavato, distrikan’i Nosy Varika, ny herinandro teo. Nentin-katezerana ny fianakavian’ilay ramatoa vadiny rehefa nahafantatra fa ilay rangahy vadiny ihany no namono nahafaty am-badiny. Nalaky tonga ny zandary fa raha tsy izany matin’ny olona ilay nahavanon-doza.